Vavaka hanasitranana ny fitaintainanana. ? Miadia amin'ny adin-tsaina sy ny fahaketrahana.
Vavaka hanasitranana ny tebiteby. Ny fanahiana dia ny fahatsapana manova ny zavatra tsara amin'ny fiainana ho lasa antony manahy sy mijaly. Raha olona mino ianao na te ho tonga iray, ampidiro ao amin'ny fiainanao andavanandro a vavaka h hanasitranana ny tebiteby. Mety ho ilay fitsaboana tsara indrindra hiatrehana ireo fotoana tsy fahatokisana sy famoizam-po.
1 Vavaka hanasitranana ny tebiteby
2 Vavaka ho fanasitranana mangatsiaka
3 Vavaka hanasitrana finoana amin'ny fotoana rehetra
4 Vavaka hamafisana ny tebiteby maika
Ny famaritana siantifika be mpampiasa indrindra momba ny fitaintainanana dia: "toe-piainana tsy mahafinaritra, tsy ampoizina, tsy mifandanja, manaja saina noho ny tahotra ny kalitaon'ny tsy fahazoana aina ara-pihetseham-po," fa ireo teny ireo dia tsy tena haneho izay tsapanao, sa tsy izany? ? Fa izao dia tsy maintsy manontany tena ianao hoe inona no mampiady saina anao ary manao ahoana a vavaka h hanasitranana ny tebiteby afaka manampy ianao Androany, ny antony roa lehibe mahatonga ny tebiteby dia ny asa sy ny fitiavana fitiavana, satria ireo no faritra roa amin'ny fiainana izay entin'ny vesatra ary matahotra ny tsy hahomby isika. Tsy mampanahy ny olana, ny olana dia rehefa ny fanahiana be loatra sy ny fanoloran-tena amin'ny asa ary ny fifandraisana dia manakana antsika tsy hanana fahasalamana tsara, torimaso tsara amin'ny alina ary misakafo ara-dalàna koa. Ankehitriny, ianao vao mahalala ny olanao sy ny fiantraikan'izany eo amin'ny fiainanao, fotoana izao hitadiavana fomba hitantanana izany fisainana rehetra izany ao anatinao! Betsaka ny mitady fitsaboana, aretin-tsaina, saingy eo koa ny fomba mahomby amin'ny finoana. Azonao atao koa ny mitady fanampiana ara-pitsaboana, saingy raha mivoaka isan'andro ianao rehefa mivavaka amin'ny fomba mahasitrana ny fanahiana, dia ho maivana kokoa ny andronao, miaraka amin'ny fiadanam-po bebe kokoa ary mandanjalanja ara-pihetseham-po kokoa.
Vavaka ho fanasitranana mangatsiaka
“Mino aho, Tompoko, fa Ianao dia Andriamanitra Ray Tsitoha, mpamorona ny lanitra sy ny tany. Mino an'i Jesosy Kristy, Mpamonjy ny olombelona rehetra aho. Mino ny Fanahy Masina manamasina aho. Tompoko, anio dia mangataka fahasoavan'ny fahalalahana amin'ny fanahiana ao aminay izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, afaho aho amin'ity fahoriana ity, afaho aho amin'izany fanahiana izany. Tompoko, enga anie ny herinao manafaka hanafaka ny fanahin'ny famoizam-po, manala ny fatorana rehetra sy ny fisehoan'ny fitaintainanana rehetra. Sitrano, Tompoko, ny toerana nonenan'ity faharatsiana ity, esory ao am-potony ity olana ity, sitrano ireo fahatsiarovana, ireo marika ratsy. Andriamanitra Andriamanitra ô, enga anie ny hafaliana hiroboka tanteraka amin'ny fiainako. Amin'ny herinao sy amin'ny anaran'i Jesosy, avereno ny tantarako, ny lasa sy ny ankehitriny. Afaho amin'ny ratsy rehetra aho, Tompoko, ary enga anie aho ho sitrana sy hafahana eo anatrehanao amin'ny fotoan'ny fahirano, ny fandaozana ary ny fandavana. Miala amin'ny hery manafaka an'i Jesosy Kristy Tompontsika aho, ny fanahiana, ny tsy fahatokisana, ny famoizam-po ary mihazona ny heriny aho, Tompoko, amin'ny fahasoavany. Omeo ahy, Tompoko, ny fahasoavana hanafaka anao amin'ny fanahiana, alahelo ary fahaketrahana. Amen. Misy hafa koa vavaka h hanasitranana ny tebiteby izay fohy kokoa. Azonao atao ny manoratra azy eo amin'ny taratasy ary atao isaky ny mahatsapa:
Vavaka hanasitrana finoana amin'ny fotoana rehetra
«Ry Tompoko Tsitoha ô, fangatahana feno fahalalam-pomba ary tsy misy finoana ratsy. Mangataka kely ny fiadananao aho, ny tso-dranonao ary ny fanahianao. Mba hahasitrana dia mangataka aminao aho mba esory io fanahiana io. Misaotra, mankasitraka hatrany hatrany hatramin'ny farany aho. Amena.
Vavaka hamafisana ny tebiteby maika
“Tompo ô, ianao irery no mahalala ny foko, koa amin'ny finoana sy ny fanetren-tena, mangataka aminao aho ho amin'ny fahasoavana hianaranao hametraka ny ahiahiko sy aminao. Te hanary ny tenanao amin'ny sandrinao aho, hatoky ary hiandry am-pitoniana ny hetsika ataonao amin'ny fiainako! Tehirizo ny eritreritra, ny fahatsapana ary ny saiko ka tsy dia manahy be loatra aho. Ampio aho hampifantoka ny saiko amin'ny zavatra tsara ho ahy sy ny fanjakanao. Hamasino aho, mba ho lasa olona feno ny Fanahy Masina aho, mamirapiratra mamirapiratra, milamina ary milamina! Omeo hery aho mba hihazonana ny fihetseham-poko sy ny eritreritro hihazona fahatokisana an'Andriamanitra. Tompoko, misaotra anao satria fantatro fa mikarakara ahy. Hiezaka ny hanaraka ny dingana rehetra izay asehonao amiko ianao dia ilaina amin'ny fanatanterahana ny drafitrao eo amin'ny fiainako. Matoky anao aho sy ny teninao. Omeko anao ny ahiahiko rehetra sy ny fanahiako. Sitraka aho noho ny ahiahy be loatra! Matoky anao aho ary manantena anao. Amen.